बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू - Popular Jewelry
के तपाई अनुकूलन डिजाइन गहना बनाउनु हुन्छ?
हो, हामी गर्छौं। हामी उच्च गुणवत्ताको सामग्री प्रयोग गर्दछौं। हामी लगभग years० बर्षदेखि अद्वितीय अनुकूलित टुक्राहरू डिजाइन र शिल्प गर्न हाम्रा ग्राहकहरूसँग काम गर्दै छौं।
लोकप्रियमा अनुकूलित बनाएको गहनाका बारे थप जानकारी खोज्नुहोस्।
म ग्रिलहरू वा सुन दाँतहरूको सेट अर्डर कसरी गर्न सक्छु?
केहि मोर्चाका लागि तयार हुनुहुन्छ? NYC मा तपाईं हाम्रो समर्पित पृष्ठ भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ कस्टम-मेड ग्रिलहरू बारे अधिक जान्नको लागि:
अनुकूलन बनाइएको-बाट-अर्डर ग्रिलहरूको बारेमा अधिक फेला पार्नुहोस् Popular Jewelry.
मेरो आकार के हो?
गहना कसरी फिट हुन सक्छ भन्ने बारे विचार प्राप्त गर्न, तपाईं गहनाका बिभिन्न प्रकारका लागि यी साइजिंग गाईडहरू जाँच गर्न सक्नुहुन्छ:
ब्रेसलेटहरू - Wristwear का लागि साइजिंग गाईड (र एंकलेटहरू पनि!)
नेकलेसहरू - तपाईको घाँटीका लागि उत्तम फिट चयन गर्दै
पेंडन्टहरू - तपाईंको नेकलेसको लागि उपयुक्त आकारको टुक्राहरूको चयन गर्दै
रिingsहरू - सही औंठी आकार छनौट गर्दै
के तपाईं क्रेडिट कार्डहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ?
हो, हामी भिसा, मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस र डिस्कभर सहित सबै प्रमुख क्रेडिट कार्डहरू स्वीकार गर्दछौं। थपमा हामी अमेजन पे, एप्पल पे, गुगल भुक्तानी, पेपैल र बिटकइन पनि स्वीकार गर्दछौं। र यदि तपाईं पनि सोचमा परिरहनु भएको थियो भने हामी पनि राम्रो ओएलको शैली, चिसो हार्ड नगद स्वीकार्छौं। (कृपया यसलाई हामीलाई मेल नगर्नुहोस्।)
तपाईंसँग के अन्य भुक्तानी विकल्पहरू छन्?
हामी विभिन्न वैकल्पिक भुक्तानी विधिहरू स्वीकार गर्दछौं जुन PayPal चेकआउट हो, जसले तपाईंलाई हाम्रो अनलाइन स्टोर र हाम्रो भौतिक स्टोरमा तपाईंको अर्डरहरू भुक्तान गर्न अनुमति दिनेछ। थप रूपमा, हामी एनएफसी (फील्ड कम्युनिकेशनको नजिक) मोबाइल भुक्तानहरू स्वीकार गर्दछौं जस्तै एप्पल पे, एन्ड्रोइड प्ले र सामसु Samsung प्ले। हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई बहुविध कार्डहरू वा भुक्तान विधिहरूको संयोजनको साथ भण्डारण खरीदहरूको लागि भुक्तान विकल्प पनि प्रस्ताव गर्दछौं। हामी पनि बैंक तार, क्यासियरको / प्रमाणित चेक, र मनी अर्डर स्वीकार गर्दछौं। अतिरिक्त भुक्तानी प्रशोधन समय यी भुक्तानी विधिहरूमा लागू हुन्छ। थप रूपमा, भुक्तानी खाली गर्नु पर्दछ व्यापारिक विमोचन वा ग्राहकलाई पठाउन अघि।
के तपाइँ लायावे योजनाहरू प्रस्ताव गर्नुहुन्छ?
हो, हामी गर्छौं। हाम्रो लचिलो layaway योजनाहरु साप्ताहिक देखि मासिक भुक्तानी को लागी र मानक day ० दिन को अवधि छ। यदि तपाइँ अनुकूलित भुक्तानी अवधि को जरूरत छ, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस.
समय को लागी त्यहाँ स्वचालित रूपमा हाम्रो वेबसाइट को माध्यम बाट एक layaway योजना बनाउन को लागी कुनै तरिका छैन। तपाइँ को माध्यम बाट हामी सम्म पुग्न को लागी आवश्यक छ ई-मेल (info@popular.jewelry) वा हामीलाई एक दिनुहोस् +1 (212) 941-7942 मा कल गर्नुहोस्
तपाईं वित्त प्रदान गर्नुहुन्छ?
सकारात्मक! (पन इरादा) हामी विश्वास गर्छौं गहनाहरू अफरफर्डेबल हुनु हुँदैन। लगातार मूल्यमा सुनको मूल्यको साथ, हामी जहिले पनि हाम्रा राम्रो गहनाहरू सबैको लागि बढी किफायती बनाउनका लागि उपायहरू पत्ता लगाउँदछौं। हाम्रो लचिलो layaway योजना को बाहेक, अनलाइन गरिएको खरीद मार्फत वित्त पोषण गर्न सकिन्छ पुष्टि गर्नुहोस् र Paypal क्रेडिट, र जिप (पहिले क्वाडपे)। एक पटक तपाइँ क्रेडिट को एक लाइन को लागी अनुमोदित गरीएको छ, तपाइँ हाम्रो अनलाइन स्टोर को माध्यम बाट जाँच गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाइँ सामान्यतया र वित्तपोषण विकल्प तपाइँलाई प्रस्तुत गरिनेछ।
मेरो अर्डर कहिले आउनेछ?
एक कम्पनी को रूप मा गर्व संग स्थापित र न्यूयोर्क मा आधारित, हामी जान्दछौं कि हाम्रा ग्राहकहरु सधैं हाम्रो पसल मा पसल गर्न को लागी आफ्नो प्याक कार्यक्रम बाट धेरै समय समर्पित गर्न सक्षम छैनन्। एकै समयमा, हामी जान्दछौं कि उनीहरु जहाँ भएपनि यो गर्न को सुविधा लाई माया गर्दछन्, र अत्यन्तै सहजता संग। यही कारणले गर्दा हामी अर्डर प्रोसेसिंग को रूप मा छिटो भन्दा छिटो मानवीय रूप मा उपलब्ध गराउन को लागी प्रयास गर्दछौं - धेरै जसो अवस्थामा, स्टक मा आईटमहरु लगाउन को लागी तयार छन् आदेश एकै व्यापार दिन मा बाहिर पठाइनेछ। तपाइँ स्वचालित रूपमा एक वितरण ट्र्याकि email ईमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ एक पटक तपाइँको अर्डर प्रशोधन गरीएको छ र ढुवानी को लागी तयार छ।
डेलिभरीहरूमा अधिक विस्तृत रुन्डउनको लागि, तपाईं हाम्रो शिपिंग नीति यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ।
मैले मेरो गहनाको हेरचाह कसरी गर्नुपर्छ?
लोकप्रियबाट सबै राम्रो गहना खरीदहरू पूरक पेशेवर गहना सफाईको जीवनकालको साथ आउँदछन्। हामी तपाईंको गहना सम्भव भएसम्म नरम हुन सिफारिस गर्छौं। धेरै जसो केसहरूमा न्यानो पानी र हल्का साबुन प्रयोग गर्नाले तपाईंको गहनाहरू सफा हुन्छ।
राम्रो गहना मर्मतसम्भारको बारेमा अझ गहन मार्गनिर्देशनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
के तपाईं गहना मर्मत गर्नुहुन्छ?
हो, हामी गर्छौं। हामी सुन र चाँदी गहना टुक्राहरु को मरम्मत सेवाहरु प्रदान गर्दछौं। तपाइँ भर्खरै तपाइँको क्षतिग्रस्त टुक्रा हाम्रो स्टोर मा ल्याउनु पर्छ र हामी सकेसम्म चाँडो यसलाई ठीक गर्न को लागी हाम्रो सबै भन्दा राम्रो गर्नेछौं। काम को हाम्रो उच्च मात्रा को कारण, कृपया योग्य छ भने उही दिन गहना दिनचर्या मरम्मत सेवा को लागी कम से कम 2-3 घण्टा प्रतीक्षा समय को अनुमति दिनुहोस्। काम पूरा समय कम्पोनेन्ट / पार्ट्स, काम को जटिलता र पहिले नै कतार मा काम को मात्रा को उपलब्धता मा निर्भर गर्दछ।
के तपाईं घडिहरु मर्मत गर्नुहुन्छ?
हो, हामी गर्छौं। हामी नियमित सेवाको ब्याट्री परिवर्तनबाट मेकानिकल आन्दोलनको मर्मत / मर्मतमा वाच सेवाहरूको पूर्ण सूट प्रस्ताव गर्दछौं। निदान र उद्धरणको लागि हाम्रो स्टोरमा तपाईंको मूल्यवान घडी ल्याउन स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्। यो राम्रो हातमा हुनेछ।
खरीदको लागि शारीरिक रूपमा स्टोरमा हाम्रो इन-स्टोर रिटर्न नीति लागू हुन्छ जुन खरीद रसिदमा पनि लेखिएको छ:
केवल एक्सचेन्जहरू सामान्यतया अनुमति दिईन्छ र खरिदको days दिन भित्रमा हुनुपर्दछ।
हाम्रो अनलाइन स्टोरमा भएका खरीदहरूको लागि, हाम्रो अनलाइन रिटर्न नीति लागू हुन्छ। हाम्रो फिर्ती नीतिको बारेमा थप जानकारीको लागि कृपया हाम्रो भ्रमण गर्नुहोस् शिपिंग र रिटर्न नीति पृष्ठ।